मोरङमा आमाले ‘केटासंग फोनमा धेरै कुरा नगर’ भनेर सम्झाइन्, रिसाएर हिँडेकी १६ वर्षकी छोरी २० हजार भारुमा ‘ ? « Gaunbeshi
मोरङमा आमाले ‘केटासंग फोनमा धेरै कुरा नगर’ भनेर सम्झाइन्, रिसाएर हिँडेकी १६ वर्षकी छोरी २० हजार भारुमा ‘ ?
प्रकाशित मिति : 26 August, 2021
काठमाडौ । आमाले धेरै मोवाइलमा नभुल्नु भनेर सम्झाउँदा घर छो डेर हिँडेकी एक किशोरीलाई प्रहरीले भारतवाट उ द्दा र गरेको छ । उनी आफै भारत पुगेकी थिइन् । भारतमा कोठा लिएर बसेकी किशोरीलाई अर्की एक महिलाले २० हजार भारुमा बे चि दिएकी थिइन् । मोरङ स्थायी घर भएकी किशोरी का बुवा आमा चिया पसल चलाउँथे । तर किशोरी भने एक जना युवकसंग फोनमा निकै धेरै कुरा गरिरहन्थिन् ।
आमाले आफुले भनेको नमानेपछि बुलालाई भनिदिन्छु भनेर चेतावनी दिएपछि उनी घर छो डे र हिँडेकी थिइन् । उनको प्रेमी भनिएका ति युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि किशोरी भारतमा रहेको खुलेको थियो । यद्धपी किशोरीलाई भारत पुर्याउनेमा ति युवकको हात भने छैन ।
युवकलाई भारतवाट आएको फोनका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । तर उनलाई आएको फोन भारतकी एक माया नाम गरेकी महिलाको थियो । ति महिलाले किशोरीलाई भारतको विहारको सिमराई भन्ने स्थानमा कोठा भाडामा लिएर बसेको बेलामा फेला पारेकी थिइन् । आमासंग रिसाएर भारतको सिमराई पुगेकी ति किशोरी त्यहाँ कोठा भाडामा लिएर बसेकी थिइन् ।
मायाले किशोरीलाई डान्स बा रमा काम लगाइदिन्छु भनेर फकाइन् तर उनले ध न्दा मा ल’गा उन खोजेपछि उनले मानिनन् । ध न्दा मा ल’गा उन मायाले ति किशोरी लाई निकै या त ना समेत दि’एकी थिइन् । त्यसको घाउ चो ट अहिले पनि किशोरीको श रि रमा छ । जति गरेपनि ध न्दा मा ल’गा उन नसकेपछि मायाले गुडगाउँको एक च ट क देखाउने पुरुषलाई २० हजार भारुमा बे चि दिइन् ।
ति किशोरीले च ट क देखाउनेले भने आफुलाई नराम्रो न गरेको बयान दिएकी छन् । उनले राम्रा लुगा किनिदिने, डान्स गर्न लगाउने काम मात्र ग रा उँथे । प्रहरीले मायाको फोन कल रे क र्ड ९सिडिआर० हेरेपछि बल्ल मायाले ति किशोरीलाई आफुले हरियाणाको गुडगाउँको पुरुषलाई बे चि दिएको बताएकी थिइन् । हरियाणामा बस्ने मोहम्मद मुवारक नाम गरेका व्यक्तिसँग २० हजार लिएर मायाले किशोरीलाई बे चि न् । त्यसपछि उनी मुवारकसँगै हरियाणा पुगेकी थिइन् ।
प्रहरीले ति किशोरीलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उ द्दा र गरेको छ । १६ वर्षीय किशोरी एक्लै बसेको देखेर मायाले उनलाई ग ल त का ममा ल गा उने प्रयास गरेकी थिइन् । गत वैशाख ९ गते आमाले राखेको केही पैसा बोकेर भारततर्फ लागेकी ति किशोरीलाइ प्रहरीले नेपाल ल्याएको हो । उनलाई अहिले आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ ।